Xulka Portugal oo markii u horeysay ku guuleystay Koobka Qaramada Yurub | Radio Baidoa
Guriga Wararka Idaacada Xulka Portugal oo markii u horeysay ku guuleystay Koobka Qaramada Yurub
Xulka Portugal oo markii u horeysay ku guuleystay Koobka Qaramada Yurub
Xulka Portugal ayaa xalay markii u horeysay ku guuleystay Koobka Qaramada Yurub ee EURO 2016, kadib markii ciyaartii Finalka 1-0 uga badiyeen xulka Faransiiska oo Tartankan marti gelinayay.
Ciyaarta oo ahead mid aad u xiiso badneyd ayaa ka dhacday garoonka Stade de France ee magaalada Paris, waxaana ka qeyb galay daawashadeeda kumanaan dadweyne, iyadoo shaashado waa weyn la dhigay qeybo badan oo ka mid ah Paris iyo magaalooyin kale.
Daqiiqadihii hore ee ciyaarta ayaa waxaa dhaawac soo gaaray ciyaaryahan Cristiano Ronaldo oo laga saaray ciyaarta, Ronaldo ayaa markii lagu qaaday bareelo oohin jabsaday, isagoo aad uga xumaa in ciyaarta dhaawac looga saaro.
Ciyaartoyda Faransiiska ayaa fursado badan ka khasariyay, iyadoo aad ugu gacan sareeyay kooxda Portugal oo wixii ka dambeeyay markii Ronaldo la bedelay bilaabay inay dhexda iyo difaaca xoojiyaan.
Griezmann ayaa kubad madax aheyd waxaa ka bixiyay goolhayaha Portugal, sidoo kale ciyaaryahan Sissoko ayaa kubad uu banaanka ka soo tuuray waxaa mar kale bad baadiyay goolhaye Rui Patricio.
Qeybta hore ee ciyaarta ayaa ku dhamaatay 0-0, qeybta labaad ayaa marka la isku soo noqday waxaa mar kale ciyaartoyda Faransiiska ay sii wadeen weerarkooda, inkastoo aanay gool dhalin.
Dhamaadkii ciyaarta ayaa ciyaaryahan Gignac oo bedelay Olivier Giroud waxaa uu kubad uu dhinac mariyay goolhayaha Portugal waxaa ka soo celisay birta.
90-kii daqiiqo ayaa ku dhamaatay 0-0, iyadoo lagu daray 30-daqiiqo dheeraad ah, waxaana la isla lahaa in sodonkan lagu kala bixi doona.
15-ka dambe ayaa xulka Portugal waxay heleen goolkii farxad geliyay, isla markaana niyad jebiyay taageerayaasha Faransiiska, markii ciyaaryahan Eder kubad uu banaanka ka tuuray ay si lama filaan ah u dhinac martay goolhayaha Faransiiska, goolkaas ayaana guusha ku hoggaamiyay Portugal.
Portugal ayaa sanadkii 2004 oo koobka Qaramada Yurub lagu marti gelinayay dalkooda waxaa ka qaaday xulka Greece, waxaana 12 sano kadib ay ku guuleysteen koobka, iyagoo ka qaaday xulka Faransiiska oo dalkooda lagu marti gelinayay.
Faransiiska ayaa ciyaar aad u wanaagsan soo bandhigay, balse nasiibka ayaa ka weecday, waxaana Portugal uu ahaa dal aan marnaba la fileyn inuu ku guuleysanayo koobka.
Portugal ayaa noqday xulkii u horeeyay ee kaalin 3aad ku soo baxa, hadana Koob ku guuleystay, iyadoo Group-kii uu Tartankan kaga jiray uu kaalinta 3aad kaga soo baxay, markii saddexdii kulan oo dhan uu bar baro galay.